Liverpool oo badisay iyo Arsenal oo bareejo gashay
Ciyaar aad u xiiso badnayd oo dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Aston Villa, ayaa kusoo dhammaatay natiijo lama filaan ah kadib markii 6 ciyaartooy oo Reds ah soo taabteen shabaqa.
Liverpool ayaa marti u ahayd kooxda xili ciyaareedkan dhibaataysan ee Aston Villa, taasoo lasoo dhawayay iyadoo ku jirtay kaalinta 20 aad ee kala saraynta horyaalka, laakiin Reds oo kulankii hore barbaro niyad-jab ah Anfield kagala kulantay kooxda kaalinta 19 aad ku jirta ee Sunderland, ayaa markale maanka ku hasyay inay dhibaato ka soo gaadhi karto Aston Villa oo ka dagaalamaysa inay heerka hoose udhacdo.
Tababaraha Liverpool, Klopp ayaa ugu danbayn isla helay weerarka kooxdiisa oo taam ah waxaana kulankan diyaar u ahaa, Daniel Sturridge oo shaxda Reds ku bilawday halka Benteke oo marti loo ahaa kooxdiisii hore uu kursiga kaydka la fidhayay Origi oo isaguna dhaawac ka soo laabtay.
Liverpool ayaa kor usoo kacday kadib markii ay kubadiyeen 6:0 oo ay u kala dhaliyeen laacibiinta kala ah; Daniel Sturridge, James Milner, Emre Can,Divock Okoth Origi,Nathaniel Clyne iyo Kolo Habib Touré.
Dhinaca kale, kooxda Arsenal ayaa guul ay ku rafaaday oo xili danbe ah Emirates Stadium kaga gaadhay 10 ciyaartoy oo Leicester City ah, waxayna Arsenal guushan xili ciyaareedkeeda muhiimka ah ay ku gaadhay 2:1.
Inkasta oo ay Leicester City hogaanka ciyaarta u haysay ilaa daqiiqadii 69 aad haddana Arsenal ayaa awooday in ay laba gool la timado iyada oo Leicester City lagu soo yareeyay 10 ciyaartoy waxaana kaadhka cas laga siiyay Danny Simpson.